Filed under: စုံစီနဖာ, ဆောင်းပါး — 14 Comments
ထဲက ဖယောင်းတိုင် ပမာပါပဲကွယ်”…အမေတို့ကလည်းဒီလောက်ပါမျှော်လင့်ပါတယ်။
တို့အဖွဲ့အနေနဲ့ပြန်လည်ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်စေ …ဒီနေရာကနေ… တဆင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြား နိုင်ပါတယ်။ဒီကျောင်းကလေးရဲ့ မူရင်းဓာတ်ပုံ တွေပါ။
>ဒီအကြောင်းကို ကျနော်တို့ ဆုံဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ အသေးစိတ်ရှင်းပြရင်ကောင်းမယ်နော် ကိုချမ်း။ ကျနော်ကတော့ တတ်နိုင်သလောက် ကျနော့်စားစရိတ်ထဲက ထည့်ချင်တယ်ဗျာ။ =]
>အကိုရေ သိပ်ကို တန်ဖိုးရှိတယ့် ပိုစ့်လေးပဲဗျ။ ဟုတ်တယ် အကို၊ ဒီလိုကျောင်းမျိုးလေး တွေ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အများကြီးရှိနေတယ်။ အောက်က မေးလ် ကိုကျွန်တော်လည်း forward ကနေရဖူးလို့ နီးစပ်ရာ လူတွေကို ထပ်ပြီး ဖြန့်ဝေဖူးတယ်။ အခုလို နည်းပညာ အခွင့်အလမ်း တွေ များလာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီလိုကျောင်းလေးတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အရင် ကထက်တော့ ပိုလုပ်နိုင်မှာ ပါ အကိုရေ။ အခုလို ဘလော့ပိုစ့် လေးတွေတင်ပေးတာက အစ၊ အလျှူရှင်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးတာ အထိပေါ့။ အောင်မြင်ပါစေ အကိုရေ၊ အနာဂါတ်ရဲ့ အညွန့်အဖူး လေးတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်က အကောင်းဆုံး လုပ်ကြတာပေါ့။ခင်မင်လျက်
>တန်ဖိုးရှိတဲ့ပို့စ်လေးပါ စေတနာရှင်တွေ အမှန်တကယ်ပေါ်လာမှာပါ…။ဒီလို လိုအပ်နေတဲ့ နေရာ တွေအများကြီးရှိပါတယ်…။ကိုယ်နီးစပ်ရာကို ထောက်ပံ့ကူညီကြတာပေါ့…။
>အင်း အခုလိုအခြေအနေနဲ. ကြုံတွေ.နေရတာတွေ ဘယ်လောက်တောင်များရှိလည်းမသိဘူးအကိုရာ ဒီလိုတန်ဖိုး ရှိတဲ.ပို.စ်လေးတွေကိုဖော်ထုတ်ရေးသားတာ ကျေးဇူးတင်တယ်ပါဗျာ …အလိုအခြေအနေတွေ ကြားရတော. စိတ်မကောင်းတာတော.အမှန်ဘဲဗျာ …
>လှူဒါန်းသူတွေကို သာဓုခေါ်ပါတယ်။ ပညာရေးအလှူဆိုတာ တကယ်တန်ဖိုး ရှိပါတယ်။ အဲလို ကျေးလက်လေးတွေမှာ သူတို့လေးတွေရဲ့ ဘ၀လေးတွေကို ကူညီရတာ ပီတိဖြစ်စရာကောင်းမှာပါ။
>ပရဟိတအလုပ်ဆိုတာကောင်းပါတယ် လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင် ကိုယ့်အကျိုးအများအကျိုး နှစ်ခုစလုံး ကြည့်မှမျက်လုံးနှစ်လုံးပါတဲ့လူ နဲ့တူမှာပေါ့ နော် အခုဘဝရောနောင်ဘဝပါ နတ်လူသာဓုခေါ်မှာပါ။
>စေတနာသည်ကံတဲ့…. တွင်းတူးပြီး ကောင်းမှု၊မကောင်းမှုတွေကို မြှုပ်နှံထားရသလိုပါပဲ..ဘ၀ဆိုတာ…တစ်ချိန်တန်လို့ အဲ့ဒီ့တွင်းလေးကို ပြန်တူးကြည့်လို့ ကောင်းမှုတွေများများ ကိုတွေ့ရရင် ပျော်ရမယ်..အဲ..မကောင်းမှုတွေကိုများများ တွေ့ရရင် စိတ်ညစ်စရာကြီးနော်…တဲ့..ကြားဖူးတယ်ဒီတော့ တွင်းလေးထဲမှာ ဘာတွေကို မြှုပ်ထားကြမလဲ…
>ဒီပိုစ့်လေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ချမ်းလင်းနေ။ကိုယ်တို့လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိသေးပါလား ဆိုတဲ့ အသိလေးကို ရသွားတယ်။
>ကိုချမ်းကျနော်လဲ ပညာ ဒါနပြုချင်ပါတယ်…ဒီပိုစ့်လေးက ပိုစ့်ကောင်းလေးတစ်ပုစ်ပါဖတ်ရတဲ့သူတိုင်း သနား ကရုဏာစိတ်ဝင်ပြီး အလှုငွေ ထည့်ဝင်ချင်မှာ အမှန်ပါပဲ…ချစ်ခင်စွာဖြင့်ဖိုးစိန်
>ကိုချမ်းရေ အရမ်းကို အသုံးဝင်တဲ့ ပို့စ်လေးပါ ၀ိုင်းတို့တွေ မသိကြသေးတဲ့ တခြားနေရာတွေ ပညာသင်ဖို့ အထောက်အကူတွေ လိုအပ်နေတဲ့ ကျောင်းတွေ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ပရဟိတ အလုပ်တွေ လုပ်ပေးတာ တကယ့်ကို ပီတိဖြစ်စရာပါ။ ဒီ့ထက် အလှူရှင်တွေပိုများပြီး သူတို့လေးတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါစေလို့…
>ခုတော့ စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတာထက် ဘာမှမပြောချင်တော့ပါဘူး ကိုချမ်းရေ တွေ့မယ့်နေ့ ကျမှ အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြတာပေါ့နော်
>ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်ပရပိာတအဖွဲ့ကိုခုလိုအသိအမှတ်ပြုဖေါ်ပြပေးတဲ့ကိုချမ်းလင်းနေကို အားလုံးရဲ့ကိုယ်စား အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကို ပိုစ် လေးကြောင့် ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရက်ထက်စောပြီး အလှူကိုစတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဝိုင်းဝန်းကူညီသူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးပါ။မြန်မာ့ကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂါတ်အတွက် အကို့သင်ပုန်းကြီးကျောင်းထဲကလို ကျောင်းလေးတွေအတွက် အကို့ရဲ့ စာပေဒါနက အလွန်မွန်မြတ်ပါတယ်အကို။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေပါကြောင်း